Kavha yeMono Chinyorwa Zve Nyowani Zvigadzirwa Uye Chilled - Potatoes News
Yakavanzika Policy yemapatata.news app
China, August 5, 2021
Zviitiko uye kuratidzira
Mafetiraiza nemishonga yekuuraya zvipuka
Mutsva mbatatisi dzakasiyana
Zvigadzirwa zvekugadzirisa matapiri
Iyo tekinoroji yekugadzirisa mbatatisi
Kuiswa kwemono zvigadzirwa zvechigadzirwa chitsva uye kutonhora
Yakanakisa pasherefu hupenyu uye kuratidzwa kwezvigadzirwa uye zvakanaka kune nharaunda. Chinetso icho makambani mazhinji arikusangana nacho parizvino. Dutch Pack's nyowani mono zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kune imwe mhando yezvinhu zvakasvibirira uye nekudaro zvinogoneka kugadziriswazve.
“Zvese zvinoenderana nekuti mutengi anowana sei chigadzirwa chako. Kuti uwane ruzivo rwakakwana rwevatengi, kurongedzwa kwechigadzirwa chako ndechimwe chinhu chekufunga nezvazvo nokungwarira, ”anotsanangura anotakura zvinhu. “Kurongedza kwacho kunofanirwa kuve nyore kushandisa. Zvemutengi, asiwo zvemuchina unoshandiswa kurongedza, uye zvinofanirwa kuvimbisa pasherefu hupenyu hwechigadzirwa chako. ”
Kazhinji mapepa ekuputira ane akati wandei akaturikidzana epurasitiki dzakasiyana kuti asangane zvese zvekupakata zvinodiwa. Izvi zvinomesa marara. Zvekugadzirisa zvakakwana, firimu kubva mumupumburu uye mabhegi akaumbirwa mune mono zvinhu zvakagadzirwa. Izvi zvakare zvinokwanisika neakakwira oxygen chipingamupinyi uye nekudaro inokodzera kwazvo zvigadzirwa zvinotonhora.
“Tinogona kubatsira nefirimu kubva mumupumburu uye mabhegi akafanorongwa anogona kugadziridzwa nekumhanyisa, aine anti-mhute, resealability uye inokodzera kudziya mu microwave. Isu tinofunga pamwe kuburikidza neyakaitika yese kuvandudza inoyevedza uye inoshanda kurongedza. "
Kuti uwane mamwe mashoko,
/ iyo-tekinoroji-yeku-gadzira-matapiri /
Tags: AdsCHILLEDDutch Packzvigadzirwa zvitsvakavhaMapatata mapakeji
Kugadzira kurongedza zvinodyiwa kubva kune zvakasara agri-chikafu indasitiri
Dai 4, 2021
Kunetsekana nezve Coop's nyowani hombe kurongedza chirimwa
Pei BAG - bepa mbatata mabhegi kweanopfuura makore makumi mashanu
RPE inoratidzira nyowani inogadzirwa mbatata bhegi
Grimme UK yekumaka gumi pakuonekwa kuDriffield show nekuisa iyo yekutarisisa paHarvesteye & Haith-boka
Wageningen University & Tsvagiridzo, Bhizinesi unit Munda zvirimwa8219 PH Lelystad
01Sep9: 00 am02(sep 2)4: 00 pmMbatatariEurope 2021"PotatoEurope - Chiratidziro chekunze kwekurima mbatatisi uye michina!"
Lockdown ine simba rinodzikira pamitengo yematapiri
X5 ichavaka nzvimbo yekuparadzira munzvimbo yeBryansk yemabhiriyoni 1,5 rubles
Tifonere: + 386 69622745
© 2021 nyika Potatoes news - Kugadzira nekusimudzira sosi AMA.
Pinda muakaundi yako pazasi
Wakakanganwa password? Nyorera
Gadzira New account!
Zadza mafomu anoteedzera
Yose masimi anodiwa. Log In
Dzosera password yako
Ndokumbira utore zita rako rezita kana kero yeemail kuti uisezve password yako.